Mabasa muDubai Kune Vatorwa
Basa muMiddle East
Dubai yevana - Kurarama kushanda nekurera vana mu Dubai
Mabasa muMumbai - Tiri kuhaya muIndia!
Mabasa mu Dubai kune Vatorwa
Mabasa mu Dubai kune Vokune dzimwe nyika pasi rese. Mira kutsvaka basa. Uye tora mikana nekusimba kwedu. Tsimba redu vezvenyanzvi. Kubatsira kuwana hupenyu hutsva muEmirates. Kunyanya kune vashandi vatsva kune dzimwe nyika. Nokuda kweBasa muDhailand. Iva chaizvoizvo zvinogoneka kune vatorwa. Nezvozvi mupfungwa, tiri kutora vanoda kubva kumativi ose enyika. Titi yedu nekuda kwechikonzero ichi zvechokwadi inokurudzira kushambadzira. Kuti uwane basa pasi rose. Kubvira patakatanga kushanda. Vatsva vanotsvaka basa vanogona kuisa a CV kune yekutsvaga basa redu muEmirates. Uye pane kutaura, vakawanda vavo kuwana mabasa kubva kune dzimwe nyika kune dzimwe nyika.
Kazhinji, The United Arab Emirates. Is ndiko kunonyanya kuenda vatorwa. Nekuti nyika ino yeArab iri pane Persian Gulf. Uye uine izvi mupfungwa, ino yekuenda kwakanaka kweIndia uye Pakistani vatariri. Padivi rakanaka reDubai Guta uye Abu Dhabi. Iva yakakosha bhizinesi pakati muUAE. Nekuti ayo anogovana muganho neOman uye Saudhi Arabhiya. Uye huchapupu hwakawanda hunogonesa kutaura kuti vanoita bhizinesi rakanaka. Kunyanya munharaunda dzakavakidzana. Uyezve, mutauro wepamutemo chiArabic. Uye zviripo zvakanaka kutanga muUAE. Zvichida nokuti danho rinotevera rinogona kuva Qatar neArabia Arabia.
Asi pane zvakaipa, pane zvinhu zvishoma zvinoda kuteverwa. Pamberi pemunhu mutsva achapinda muEmirates. Kazhinji kutaura kwedu boka revatariri vashandi. Akanyora zvinyorwa zvakasiyana siyana uye zvigadzirwa. Kunyanya kuvakuru vatsva. Kuvabatsira kutanga kutanga kutsvaga basa muDaily City. Nokuti kuwana mikana semunhu wokune imwe nyika. Inoita zvakaoma zvikuru kunyanya muUnited Emirates.
Nokuda kwebasa guru shandisa nzvimbo dzekutsvaga basa
Kazhinji Kutaura, shandisa nzvimbo dzekutsvaga basa muUAE. Tende redu ratove raisa mazano akawandisa akanaka. Especially for new vanoenda kunze kwenyika. Asi, timu yedu inotaura mashoma saiti pazasi zvakare. Padivi rakashata, a munhu akajairwa haakwanise kutarisira zvakawandisa. Maximum kutsiva Ari kutenderera 2.0% kusvika kune 3.0% uye kune chokwadi yakadzika kwazvo mhinduro. Uye muzviitiko zvakawanda vanhu avo ndichakupindurai. Zvimwe kwete munhu waunotarisira. Kana kuti kupihwa kwebasa kunogona kunge kuri pasi pezvaunotarisira. Ziva wawakatumira tsamba yako yekushandira uye CV. Nokuti pane zvakawanda zvekutyora makambani pasi rose.
Kunyange zvakadaro, Dubai City Company inokurudzira kuti uedze. Nyoresa yako ruzivo munzvimbo dzebasa uye webasa revashandi. Kazhinji kutaura, ipa ivo vanyori kuyedza-kuridza kumwe. Nekuti hautomboziva zvauchazouya. Uye kupi iwe unogona kuenda kuMiddle East. Nokuti kunyanya muDaily City. Kutaurirana kwakananga kwekutaura kunogona kuita kuti basa rive nyore. Uye iwe unogona kuva chitupa chitsva. Nemhaka yehuwandu hwemabasa ekutsvaga injini. Zvakanaka nokuda kwebasa idzva uye Jobs ku Dubai kune vatorwa achiri kuzaruka. Asi, kusarudzwa kwebasa basa rinowedzera kunogona kukuunza iwe maonero matsva.
Nzira yekuwana sei basa semutungamiri?
Tsvaga zvimwe nezvemasayiti emabasa muUAE
NeGulf Talent: Chimwe chezvinhu zvakanakisisa muGulf. Kazhinji kutaura, kuve nezvakawanda zvemabasa akanaka. Zuva nezuva rinoshandiswa vacancies for Gulf Countries. Uye inyanzvi yebasa inopa muQatar pamwe ne Abu Dhabi. Vanhu vazhinji vakawana Mabasa muDubai kune vatorwa pane ino webhusaiti.
About Bayt: Kwete .1 Company kuMiddle East. Yakarongwa zvikuru kune vatorwa. Uye imwe yepamusoro webhusaiti webhusaiti. Vanhu vese over Middle East neIndia pamwe neInternational. Kutumira CV kuvatongi vavo.
About Edarabia Iyi kambani imwe yekukurumidza kukura. Ikambani inonyanya kutsvaga ndeyekudzidzisa vanhu pamwe nevamwe vatorwa. Iyi kambani imwe yepamusoro-yakatarwa muGoogle. Muzvokwadi, kuva nemamwe mabasa anopa. Kune rumwe rutivi, the kambani inopa mazano mashomanana akanaka kune vanotsvaka basa.
About Dubizle ndiyo inotungamirira webhusaiti yegaini. Kunyanya ku Dubai City. Kune rumwe rutivi, jvanotsvaka kubhi vachishandisa chikamu chavo cheUAE kutsvaga basa with visa. Company inotanga kushanda mu 2005. Kubvira panguva iyoyo dubizzle.com yava yakakurumbira zvikuru. Uye nhamba ye basa idzva rakanyorerwa. Izvi zvinowanzotauridza chikamu chechikwata. Zvechokwadi kune vanotsvaka basa nevashandi.
About Monster Gulf: Kune webhusaiti yemonster webhusaiti. Iwe unogona kutsvaga basa. Nekuti iyo kambani yave yakatenderedza kwenguva yakareba. Uye kubva ipapo monster ine yepamusoro chinzvimbo. Uye zvakanaka kwazvo vanhu kunyoresa navo.
About Glassdoor: kambani, senhau, inotanga kuisa mikana. Kunyanya ku Dubai uye Abu Dhabi. Uye kubvira ipapo, makambani anokwanisa kugamuchira kuongorora. Uyewo nekuisa mabvunzurudzo. Uyezve, vanotsvaka basa vanogona kushanda kuti vashandise nevana MBA dzidzo.
Nezve Basa Jet Careerjet iripamusoro pabasa rekutsvaga injini. Uye vazhinji vevanhu vanogona kuishandisa muUAE. Hazvina mhosva kuti chii chavanoziva. Kune rumwe rutivi, rakagadzirirwa hurongwa inoita kuti basa rekuwana basa rive nyore. Uye iyo intaneti inova nyore nyore kumushandisi. Apo Basa reJet website rinotanga kushanda.
About Dubai Careers Basa reDhailand riri basa rekuchengeta. Uyezve pane nzira itsva yokutsvaga basa. Kazhinji kutaura, iyo yakagadziriswa neSmart Dubai Hurumende Kugadzwa. Saka, ivo vari kuva nekuvimbika kwakanyanya. Kune rumwe rutivi, iyi portal ichanyatso kufambisa nzira yekukwira muAFA.
Pamusoro peRedhi: Iyi ndiyo imwe yenyika huru yekutsvaga injini yekuKU. Kune rumwe rutivi, ane mabasa ekushandira kweUAE. Nezvozvi mupfungwa, vanhu vanobva ku UK uye Vashandi vemunyika yose vanotsvaka. Inogona kushandiswa kwemikana matsva emabasa. Uyezve, vari kutumira mabasa ekupa mu GBP. Saka zvakakodzera chaizvo kuti tive nechitarisiko.
Nezvechokwadi ivo bhizinesi ndiro nzvimbo yeA .1 basa. Uye yakarongwa kumusoro kwe3 munyika. Kazhinji kutaura, kambani inokura. Nevanopfuura 200 miriyoni vashanyi vasati vari mu2018. Uye kuva nechiratidzo chitsva mwedzi woga woga.
About Naukri, Dubai City Company yakataura nzvimbo iyi yebasa. Nokuti Naukri akaunganidza nyika yose. Semuyenzaniso, muIndia, UAE, uye Qatar Nzvimbo iyi yakakonzerwa nebasa rekushandira kune vashandi kune dzimwe nyika. Uyewo nezvekupa kwekugadziriswa pamusoro pemusika wemo.
About Laimoon: Iyi nzvimbo yebasa haina kudaro inozivikanwa nokuda kwebasa muUAE. Nokuda kweiyi webhupu yekuunganidza mabasa anoshandiswa kubva kune mamwe mawebsite. zvakananga uye anewo zvinyorwa zveKatar uye Saudi Arabia.
Mabasa mu Dubai Kune Vatorwa zvakakodzera here?
Pane zvakawanda mabasa anosvika muUAE. Kubva pakudzidzisa Chirungu kusvika kubasa remanyoro. Kutanga kune yakaderera chinzvimbo chingave sarudzo. Chete kana iwe uri yemutauri wechiArabic mutauri. Kazhinji kutaura, kana iwe usina ruzivo rwakakwana. pasina mutauro weArabhu muDubai. Kune mukana wakaderera wekushandira. Zvese zvesaiti kumusoro. Vanogadzirira kune mabasa mu Dubai kune vatorwa. Uyezve, zvose zvakafanana zvakafanana.
Pamusoro pezvakaipa, vose vane huwandu hwemabasa matsva. Saka, uine izvi mupfungwa, vanhu vazhinji vari kutumira kutangazve. Uye vatsva vekutsvaga basa vanokwanisa kutonga kwavo zuva rega rega. Sezvinobvumika kuburikidza yega yega nzvimbo dzebasa. Padivi rakanaka, Dubai iri kukura kwemakumi emakore. Uye mutauro wechirungu unova iwo mukuru muEmirates. Uchifunga izvi. mikana yemabasa muUnited Emirates. Zvakare, tanga kukura pasi rese. Zvadaro, mabasa muDubai evatorwa vanovhurwa zvakashata. Chaizvoizvo vashandi vatsva vari kunze kwenyika. Unogona kutarisira kuwana mabasa akanaka. Uye nyika dzakasiyana siyana dzakatenderedza nzvimbo yeGulf. Inogona kuva imba nyowani kune vatorwa.
Dubai inotonga kune vatorwa ndeyekuti yakanaka here?
Emirates ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa pasi. Kune rimwe divi, hurongwa hwepamutemo hwakaenderana nezvimwe zvakaoma zvibvumirano. Semuenzaniso, kududzirwa kwakaoma-mutsara kwemutemo weShariya. Uye zvisinei kuti chii chiri kuitika, chinofanira kuteverwa. Imwe ye mienzaniso vashandi vepasi rose. Vanowanzogara muAud Dhabi kana Dubai kuti vaite basa. Kutanga upenyu hwavo semutorwa. Uye usatevedzera mitemo. Saka, mune imwe nyaya, nguva mujeri nokuda kwemhosva. Ichi ndicho chikonzero UAE iri kuedza kudzidzisa vaWestern. Zvaunofanira kuita uye usaita muUAE. Izvo zvinonyatsovabatsira uye aisazovaita kunyange mhosva imwe.
Pamusoro pezvakaipa, pane mienzaniso ichangobva kuitika Dubai city. Mutashanyi uyo wokune dzimwe nyika akavhuna mutemo. Uye edza kufambidzana nemagweta. Nhamo, the Brazil mutemo wakasimbisa munhu wese. Gara uchibatanidza kubata ruoko paruzhinji. Zvakare, kutumira rumbidzo paFacebook kwerudo. Uyezve kunwa doro isina rezinesi inonyatsorambidzwa pachena. Shamba dzimwe dzenhau dzakaipa, semuenzaniso, kugovana kamuri yehotera nemunhu wevakadzi / murume / musikana (asiri iye wawakaroora).
Uyezve, zviremera zveDubai hazvina kurongeka mune dzimwe nguva. The hurumende muUnited Arab Emirates. Nguva dzose tarisa nzira dzinoverengeka dzekubvunza. Haambotenderwa kutyora Sharjah mutemo kana zvasvika mufambiro wakaipa kuvatorwa. Nezvakanaka, pane zvishoma zvisiri zvevanhu vemarudzi ose. Semuyenzaniso, Dubai neAud Dhabi hotels usabvunza vakaroorana kuti vawane zvikwereti zvavo zvekuroorana.
Izvo zvakajairika kuvagari vemunharaunda muDubai. Zvakare, iyo UAE ine hupenyu hwusiku hwemunhu wese. Izvo zvinogona kuve zvisinganzwisisike asi akawanda gay mabara uye manheru emakirabhu uko East Europe Zvifeve zvinowana pachena vatengi vatsva. Ndizvo kazhinji yakazarurirwa kumarudzi ose munyika yose yeUAE.
Basa iri kuMiddle East
Tarisa nyika dzakasiyana kushanda. Kune akawanda esarudzo munzvimbo yeGulf!
Kwata, Saudhi Arabhiya, Brazil, Jodhani
Qatar uye Expats
Kutanga sei seimwe yevatorwa kuKatar?
MuQatar, kune dzakawanda nzira dzekuwana basa. Semuenzaniso, chirevo cheAmnesty International chakataura kuti vashandi vekunze vanoita basa rekuvaka iro guta nyowani muQatar. Uye iyo inotarisira kushandisa yakawanda expats akawanda muQatar. Kune rimwe divi, mukombe wepasi rose mumitambo ye2020 urikushungurudzwa uye uchiona kutyorwa kwekodzero dzevanhu kunyangwe kuvimbiswa kwekuchinja kwehurumende. Kune rimwe divi, pane zvinhu zvishoma zvaunofanira kuziva usati waenda kuQatar.
Kana iwe uchizoshandira imwe isiri iyo kambani yemutemo. Chirevo chemakambani mashoma akarekodha kambani yeinjiniya ine zita, Mercury MENA, iyo yakasiya nezvevashandi ve80 kubva kuNepal, India, uye Philippines yakadzika uye isina kubhadharwa kwemwedzi muQatar. Saka, iwe unofanirwa kugara uchisarudza kambani yakanaka kushandira Middle East.
Asi Hurumende yakachaira makambani zvakadaro. Chete nekuti zvakaonekwa kuti ivo vaishandisa Kafala dhizaini iyo yaimiririra chirongwa cheQatar. Uye izvo zvinoita kuti vashandi vanamatire kune mumwe mushandirwi muhurongwa kushandisa mari yakawanda yevashandi vekunze. MuNepal, vanhu ve34 vakashuma kuAmnesty kuti Mercury MENA aive nechikwereti kwavari avhareji yemapondo e1,500, uye iyo Kafala system yakashandiswa kuvabata zvisina kunaka. Saka, gara uchiedza kutaura nechikwata chedu kana zvirinani dzivisa makambani akaipa.
Nzira yekushandira sei basa muKatar?
Yakanakisa Qatar nzvimbo dzebasa dzinosangana neHurumende. Mumwe wemienzaniso ndewe Ministry yaive nebasa saiti. Ndoimwe yesaiti dzakanakisa dzinozivikanwa neredhiyo vhiza ruzivo. Uye unogona kusarudza rudzi rweVisa urikutsvaga kuwana. Semuenzaniso, unogona kunyorera vhiza yevadzidzi, vhoti yevashanyi, vhiza yebasa. Kazhinji kutaura, kune hapana dambudziko rekuwana ruzivo rwakadaro muGoogle. Kwakanakisa kunobva kune iyo mumiriri yenzvimbo. Kune rimwe divi, iwe unogona kuenda kunobvumirana munyika yako pachako. Dzine dzinenge mavisa ese eQatar. Saka, ikozvino ndiyo nguva yekutsanangura nzvimbo dzinowanikwa dzekutsvaga basas in Qatar yakanyorwa pazasi.
Kuwana mabasa muQatar semutorwa hakusi nyore kunyange zvakadaro, kana tichienzanisa nako imwe yepakati - nyika dzekumabvazuva asi zvinogoneka. Matsamba anodiwa ayo anogona kunge ari kuda basa rekunyorera akakura. Asi mibairo yavo inenge imwe yeakanakisa muMiddle East.
Saudi Arabia uye Inotsanangura
Kutanga sei seumwe wevashandi vokune dzimwe nyika muSaudi Arabia?
Zvakanaka, in Saudhi Arabhiya, vashandi vekunze vanofungidzirwa kuve 15million sezvakaita pa2019. The Bhizimusi remafuta nemukana mutsva wakawanikwa munyika iyoyo kugona kukuru. Uye ichi ndicho chikonzero nei yakakurudzira kutama mukunonoka 1930s. Parizvino, ivo vane sarudzo huru yekuvandudza kweSaudi Arabia. Saka, ivo vari kubatira vashandi vekunze vashandi vekunze. Kunyangwe hazvo vamwe vakadzoserwa kune mamwe matunhu akadai sekurima, maindasitiri ebasa remukati nekuchenesa. SevaSaudi Arabia Arabia vanoita rudo kuve nezvose munzvimbo uye zvakagadzirira kuenda chero nguva.
Sezvazviri mune yakajairwa nyika yeMuslim. Urwo rudzi rwevatorwa runosarudza hushoma hwe vashandi vekunze. Uye iwe unogona kushamisika, semuenzaniso, vashandi vanobva kuIndia nenyika dzekumadokero vakaendeswa kuSaudi Arabia. Ivo vanowanzo bata zvigaro zvepamusoro kunyange zvisina kubatwa nemaneja eSaudis. Uye zvinzvimbo zvepasi zvinobatwa ne MaAfrica uye maSoutheast Asiaans.
Nyika yeSaudi Arabia yaimbove imwe yevarombo uye zvakanyanya nyika dzisina kuvhurika munyika kare kare. Asi Pamberi pekuwanikwa kwemafuta nePetaco Mafuta (kambani yeAmerican). Pasina nguva refu mushure mekuwanikwa. Rubatsiro rwekunze uye hunyanzvi yaidikanwa kuti ishandise iyo yakakura maseji ekuchengetedza akawanikwa.
Paive nekuwedzera kuri kuwedzera kwehuwandu hwevashandi vekunze vekunoshanda muSaudi Arabia. Uye semhedzisiro ye kuwanikwa kunonyanya kubva kune dzimwe nyika dzeMiddle East. Zvirongwa zvebudiriro uye Zvirongwa zvekusimudzira zvakakurudzira huwandu hwevashandi vane hunyanzvi pamwe nevashandi vasina ruzivo. Uye vaine izvi mupfungwa, vashandi vazhinji vaive vePalestine. Uyezve vanobva vatanga kugashira vaIjipita, Yemenis nevamwe kubva kunyika dzeArabhu.
Saka, pane basa here kwandiri muSaudi Arabia?
Saudi Arabia inozivikanwa kuva ndiyo yakapfuma nyika yeArab kusvikira 2023. Icho ndeye chokwadi ruzivo rwakanaka rwe expats. Ivo vanazvo makambani mazhinji ari ku Middle East. Kambani yedu inogara iripo yebasa saiti yevanotsvaga basa sevatorwa muSaudi Arabia. Padivi rakaipa, MuSaudi Arabia, maitiro eVisa zvakare haasi nyore kuwana. Taizoti chimwe chakakomarara uye chakavhiringidza kwazvo pasi. Kunyanya kune vatorwa vanobva kuEurope kana nyika dzakabatana.
Chikwata cheSaudi Hurumende chekushambadzira hachitengi kushanya. Ivo havasi rudzi rwekugamuchira Dubai rwevanhu. Nekudaro, zvinoita sekutadza kuwana vhoti yevashanyi mune isingasviki mavhiki 2. Iko kune tsika yekuramba kupinda muSaudi Arabia. Kunyanya kune vanhu vane chitambi cheIsrael. Saka kana uchibva munyika ino uine pasipoti yakagadziridzwa. Pasinei nezvaunoita, ivo vaitoda magwaro zvakadaro. Asi izvozvo zvinogona kuve zvichidanirwa basa rako rekushandisa. Muzviitiko zvakawanda zvakadaro.
Imwe yemazano akanyanya kungwara pabasa ipapo. Kuva magwaro akadai sekisikiti yekubudirira muchikoro. Kunyanya kubatsira kuchave kana iwe wakavagadza mukati imwe yenyika dzeMuslim. Semuenzaniso koreji kana yunivhesiti, chitupa chehunhu uye chero chero zvitupa zvinoenderana. Kubva kuYunivhesiti muQatar kana United Arab Emirates. Asi pane yakanaka lehlakoreng, chinhu chete chinokuwana iwe basa ndiro CV yako. Saka, iwe unofanirwa kuziva kwaunofanira kurova nekushandisa. Semuyenzaniso, kana iwe uchiita kushambadzira nenzira kwayo. Ivo vatengi vacho zvinokurudzirwa kuti vashande pamwe newe. Uye nguva uye kushanda nesimba kwaunoshandisa kushandisa kugadzira CV yako. Unoda kuve wakanyangarika chero nguva.
The United Arab Emirates uye Expats
Nzira yekutanga sei semumwe wevatorwa muUAE?
Zvakanaka, muUAE (United Arab Emirates), iyo UAE Hurumende ndeyevatorwa. Uye nyika ino iri kufara kutora vashandi vatsva kubva kunze kwenyika. Zvakare, vatorwa kubva kumativi ose epasi. Vari kutarisa kuti usimukire apo ichiri-isina mutero. Uyezve, mabasa ane hukama nehurumende anoonekwa seanonyanya kunaka. Chete nekuti UAE nyika vanotenda kuti mune nyadzi mukati kushanda nevamwe vemasangano akazvimirira mabasa. Vazhinji vevaArabu vemuno vanoshanda nehurumende chibvumirano nemapurojekiti kana kushanda mumauto. Nyika yekushanda vhiza maitiro uye zviri pamutemo gwaro zviri nyore. Uyezve, nzanga, kana ichienzaniswa nenyika dzakavakidzana. Semuenzaniso, Saudi Arabia neQatar ndizvo zviri nani zvikuru maererano nebasa rekutamira.
Iyo UAE ine zvimwe zvinokwezva izvo zvingatofungidzira. Uye nezve izvi mupfungwa, vatorwa vepanyika vanofamba vachiendako. Imwe ye vanotsvaga basa vatinosanganisira vanhu vanobva kumadokero nyika. Kazhinji, Emiratis vashoma muhuwandu munyika yavo. Semuenzaniso, pane huwandu hwepfumbamwe kune imwe. Uyezve, iyo UAE hurumende inogadza mutemo. Uye izvo zvinotaura kuti mutorwa anokodzera kunyorera chizvarwa cheUAE mushure mekugara munyika kwenguva isingasviki 30 makore. Saka, muchokwadi, iwe unofanirwa kunge wakave uripo kwenguva refu. Pamberi pako kunyange wana mukana wekuva mugari weUAE.
Chii chandinoda kuwana basa muUAE?
Chinhu chekupedzisira magwaro eAU ekutsvaga basa. Semuenzaniso, chepamusoro kubudirira UAE chitupa muchikoro. Kuda zvirokwazvo inokubatsira kusimudza bara kuti uve nemukana mutsva. Uye kana uine koreji yenyika kana kuyunivhesiti. Izvo zvichaitika kukubatsira kuvaka UAE mabasa. Ukuwo, chitupa chehunhu uye chero humwe hunhu hunhu hunobatana kubva kune hunhu hunoremekedzeka senge US kana UK iri mukana munyika yeArabic. Asi nezvazviri, chinhu chete icho chinoita kuti uwane iwe basa ndicho Resume yako. Izvo zvinoita kushambadzira ruzivo rwako, saka, zvinokurudzirwa kushanda kuti uite CV yako ive yakakwana. Uye gara uine chokwadi chekuti hapana zvinokanganiswa. Inofanira kurangarirwa izvozvo muUnited Arab Emirates unogona kushandisa Chirungu CV.
Nyika yeJordan uye Expats
Nzira yekutanga sei semumwe wevatorwa muJorodhani?
Imwe nzvimbo muMiddle East ndiJoridhani. Nekuti nyika ino ine zvinyorwa. Ivo vanhu vakanaka uye vane iyo imba kune vanopfuura 2 miriyoni vePalestineans vapoteri se2015. Saka, kwete ivo chete vari kuhaya asiwo kutsigira vamwe. Kune anenge 98% yevaJordania vanhu vechiArabhu. Zvakare, iyo yakasara 2% ndeyechidiki madzinza. Sangano reVashandi vePasi rose muJorodhani. Yakarongedzwa muTV uye Nhau kuti mamiriro eVashandi muJoridhani akaoma. Nekuti kuvapo kwevashandi vakaderedzwa vanoshanda mudhorobhay. Semuenzaniso, vashandi vekunze vari mumushumo wakanzi "Musika unonetsa Kuwedzera Kuomera". Saka, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira uye tsvaga basa rakawanda kwazvo rekuita. Mamaneja kana kunyange Vakuru Vakuru.
Nekuda kwekutsvaga kwakanyanya kunoitwa munaSeptember 2016. Iro iro Sangano rehurumende rakanangana uye rakaenzana. Vazhinji vanhu vakawana mhedzisiro yeJoridhani yakakura kwazvo chipo chekutora vanhu vazhinji vevapoteri. Zvakare, mumusika waro wevashandi, vakataura kuti huwandu hwevashandi vayo. Chirevo chine hukama neHurumende chinotarisira kupindura mibvunzo yevashandi vekunze. Pane nzira yekuwedzera basa muJoridhani mumusika wenyika.
Saka, pane basa here kwandiri muJorodhani?
Kune rimwe divi, ivo vanoedza kuti vaone kuti vangaita sei kuti nzvimbo yekushanda igadzikane kune vese vashandi. Kwete iye chete anobva kunze asi yemhando dzose dze expats uye vashandi venzvimbo zvakare. Uye zvakare, maitiro ekubatanidza vapoteri veSyria pasina kubvisa vashandi veJordani. Uye iro rakanga riri iro bvunzo hombe rakabvunzwa nenhengo dzeEuropean. Kuvhura musika wevashandi kune vapoteri kwaive kuri kuda kuti kuve nehanya kwakanyanya kunopihwa kune kushomeka kwezvinhu mirimo yevashandi vekunze,, zvisinei nekwavo chimiro. Kuve nemvumo yekushanda kweJoridhani, kushanda mu tandem newe waunoshandira ndiko kutanga inoda chikumbiro chemabasa muJoridhani iri nyore kuwana kuburikidza nehurumende mawebhusaiti.
Kuwait country and Expats
Kutanga sei seumwe wevashandi vekune dzimwe nyika muKwaititi?
MuKuwait, pane shanduko huru mumakore apfuura. Mumwe weiyo mienzaniso ndiyo yevashandi vekunze rubatsiro rwekutsigira system. Kuve pamutemo uye mumhedzisiro, vatorwa vanofanirwa kupihwa mari neiye mushandirwi wenzvimbo kuitira kuti vawane mvumo yebasa. Saka, pane yakangwara izere iyo vanhu vazhinji vanoedza kuti vabudirire kutsvaga basas. Pakange paine shanduko huru muna Nyamavhuvhu 2008, MP Abdullah Al-Roumi akati achazogadzira mutemo wekubvisa kaitel yekune dzimwe nyika vashandi vekune dzimwe nyika rubatsiro. Saka, ivo vanozvibata izvo nenzira kwayo. Uyezve, Shanduko iyi yaive yekubatsira vatorwa. Hurumende yakanga ichironga zvekukanzura chirongwa chevatsigiri kuitira kuti vatore hurongwa hutsva. Uye ivo vanovavarira kuti yaive yakarurama nekuti izvo zvinotendera vatorwa kuti vadzore zvavanogara zvavanobvumidza. Uye kubva ipapo, Ministry of Social Affairs neVashandi inotora nyaya yavo.
Padivi rakashata, senge ari mutorwa semuenzaniso kubva kuSwitzerland. Unogona kuwana basa muKuwait. Uye iro basa zvechokwadi richabhadharwa chaizvo uye kwenguva yakareba. Saka pane izvo, basa rakatove muKuwait inosheedza kufamba kwakangwara. Asi usati watanga kushanda, unoda vhiza yebasa senge mune ipi neipi nyika yeArabic. Mvumo yebasa uye vhiza yebasa zvinhu zvakasiyana zvinhu zvakakwana, kuchengetedza mapepa ebvumo, unofanirwa kunge wakamboshanda nemushandi wako kwechinguva, uye mushure mekuva nemvumo yekushanda, panodiwa kuti uwane vhiza yekupinda pabasa chero kumumiriri wepedyo.
Saka, pane basa here kwandiri muKwaititi?
Nyika yeKuwait ine yega yakanakisa masese mawebhusaiti. Zvakanaka, ziva nezve centralized visa ruzivo. Izvo futi zvisinei nemhando yeVisa inogona kutarisirwa nevatorwa. Semuenzaniso, inogona kunge iri vhiza yemudzidzi kana vhiza revashanyi, uye pane izvo, haugone kunyatso kutonga. Kune rimwe divi, pamavhesi ebasa etc. Chokwadi, hakuzove nedambudziko rekuwana ruzivo rwakadai muBing kana Google. Nzvimbo dzakanakisa dziripo dzevanotsvaga basa muKuwait dzakanyorwa online. Unogona kuvawana vachinyorera Mabasa muKuwait yevatorwa kana mabasa muKuwait.
Kuwait senyika ine nzvimbo dzakanakisa dzekuvharira zvikamu zveMari. Saka, kuti uwane basa semutorwa, iwe unofanirwa kurova mabasa emari pakutanga. Ukuwo, takafananidza neimwe yepakati - nyika dzekumabvazuva Hazvisi nyore kuwana asi zvinogoneka. Kuwait inoda magwaro ayo angangodaro ari kudiwa kunyorwa kwebasa mumumiriri weKuwait.
Mhedziso yeDhaibha semushandi wekune dzimwe nyika
Jobs mu Dubai For Vatorwa vakanaka kuenda kumativi ose enyika. Uye nezvozvi mupfungwa, vanhu vazhinji. Kunyanya vatongi, zvechokwadi vane mukana wakanaka wekushanda. Iyo chete inoshanda pfungwa ndeye mararamiro e Dubai kana Abu Dhabi. Vatsva vashanyi veEmirates. Unofanira kutevedzera mitemo yakawanda. Kune rimwe divi, Dubai inogamuchira vatorwa vekune dzimwe nyika. Imwe yemuenzaniso i Dubai Airports, mahotera kana motokari yemabhizimisi. Munzvimbo idzi dzose mu Dubai. Vanhu vatsva vanogona kuwanikwa. Kubva kuPakistani vashandi kusvika kuIndia vashandi. Saka, kambani yedu inopa zano kune vashandi vanobva kumativi ose enyika. Zvechokwadi, kushanyira Dubai City uye tanga kushanda kunze kwenyika.
Chero nyika inoita kuti nzvimbo idzi dziwanikwe kune vanotsvaga basa vekunze vanoshuvira kuwana basa kuMiddle East. Saka kamwe zvakare tinokuyeuchidza nezve aya webasa nzvimbo.
Top job sites uye nzvimbo
Gulf Talent ane zvakawanda zvehutano hwakanaka uye zvemabasa
Mabasa mu Dubai ine kutumira kwebasa zvakananga nzvimbo muDubai
Jobs Abu Dhabi ane mahofisi emabasa mune dzimwe nzvimbo muBud Dhabi
Dubizzle inotsanangurwa senzvimbo huru kune Abu Dhabi
Glassdoor inozivikanwa kuva nemikana muBud Dhabi ne Dubai
Bayt inofungidzirwa kuve imwe yemhando yepamusoro webhusaiti yekutsvaga mu Middle East.
Monster Gulf ndeye monster basa rekutsvaga mhando rave riripo kubvira pakatanga nguva ye internet.
Gulf Jobs musika wakanaka kune Executive-level mabasa.
Career Jet yakakurumbira iyo ine basa rekutsvaga sarudzo yeUAE.
Zvechokwadi ndiyo US yebasa saiti nzvimbo yeUAE.
Dzidza 4 Zvakanaka inoita kunge iri pamusoro pekudzidzisa mabasa asi iine mabasa mune zvimwe zvikamu.
Laimoon inzvimbo inozivikanwa nezvemabasa ekuzarura aggregation kubva kumawebsite ekambani yakananga.
Kudzidzisa Chirungu muMiddle East
Imwe nzira yakangwara, uye ndapota usakanganwa kuti iri kudzidzisa Chirungu. Uye kambani yedu inogara ichiyeuchidza, kune avo vangave vanofarira kudzidzisa, kudzidzisa Chirungu. Vanogona zvirokwazvo sarudza iyo yakangwara uye yakapusa sarudzo. Ehezve, kana uchinyatsotaura muChirungu Kutaura, kana kunyora. Boka redu rekurairidza rinopa zano vatsva vekutsvaga basa kuti vaongorore pane yega yesaiti mikana yebasa zvekudzidzisa kuAU vanogona kuedza masosi akadai sekuti;
Total ESL inonyanya kubatikana interface kune avo vanofarira kudzidzisa kunze kwenyika.
ESL café ndeimwe yemabasa akanakisa kuvhurwa kubva kupasi rese.
Testall inzvimbo inounganidza yakakura mabasa ekudzidzisa.
Footprints Recruiting yakawanikwa kuva imwe yeakakura ESL kudzidzisa vatambi kuwanikwa.
Kune avo vanofarira Mabasa Emari, heano mamwe maExpress uye Shandisa Job Portals;
eFinancialCareers ndeimwe yevanowanzoda kutsvaga injini yemabasa emari aripo pawebhu asi, kunyange zvakadaro, haisi kuwanika kuKatar
Enda kune imwe nyika yakave yakawanikwa kuti ine mabasa akanaka pamwe chete
Oversea Jobs iyo nzvimbo yave ichishandiswa kwekanguva ikozvino asi inoratidzika kuva inokosha yakawanda pakati pekutsvaga kune idzi masayiti nezvimwe nzvimbo.
LinkedIn iri guru guru remashandisirwo emagetsi ekugadzira shamwari mumunda uyewo nzvimbo yaunofarira
Kunewo mamwe mawebsite akaita se;
The Guardian inozivikanwa kuva imwe yemapeji akawandisa ekutsvaga muUAE
teregirafu inopa mazano akanaka emari ekugadzirira
Iyo Middle East, Kunyanya UAE, Saudi Arabia neQatar. Nguva dzose ine basa rakanaka rinopa kunevatorwa mune mamwe masango, kupfuura dzimwe nzvimbo dzepakati-kumabvazuva. Zvakare nekuti ivo vari kutsvaga kuvandudza akawanda mapurojekiti. Asi parutivi rwakashata, pane mamwe maitiro anodiwa kune vashandi kunze kwenyika. Semuenzaniso, magwaro anogona kunge achidikanwa chero basa rekunyorera ndeaya:
Kopi dzevabereki vadhi rekadhi
24 pasipoti yemifananidzo yakavaraidza
License yekutyaira (kana iwe une)
Visa ruzivo uye mapepa
Bhizimisi yeBhangi kubva kunyika yako
POI - Uchapupu hwehuzivi (Aditional one)
Uyewo chepachikoro chepakutanga (kana uine)
2 makopi akavaraidza epasipoti
POA - Uchapupu hweAdress
Ikopi yechikoro chechikoro chechikoro
Hazvina kuitwa zvikorojijijijijijijiji
Uye zvimwe zvinhu zvishomanana zvavanokumbira
Saka, sezvaunoona, mikana iripo iwe. Zvese zvaunoda kuti uite ingova neushingi hwakakwana kuti utange hupenyu hutsva kunze kwenyika. Kune vanopfuura mamirioni e3 vanobva kune dzimwe nyika vanoshanda mu Middle East. Iwe unogona zvakare kuva mumwe wavo. Uye muchokwadi, iwe unofanirwa kuve nehurongwa hwakanaka hwekuita. Uyezve, zvinhu zvese zvakarongedzwa munyika yokumusha kwako uye tanga kushanda kunze kwenyika. Kambani yedu inogara yakamirira yako application. Saka, ndokumbira unyorere CV yako neye HR timu. Isu vatengi vanofarira kukubatsira iwe zvechokwadi !.